Kutholakale izidumbu ezingu-9 namakhanda amabili eflethini - Umbiko | News24
Kutholakale izidumbu ezingu-9 namakhanda amabili eflethini - Umbiko
Tokyo - Amaphoyisa aseJapan athole izidumbu eziyisishiyagalolunye, okubalwa namakhanda amabili azo efakwe kwi-cooler box, eflethini elisendaweni ehlala omntakabani eTokyo, kusho umbiko wezindaba ngoLwesibili.
Amaphoyisa abe esebopha uTakahiro Shiraishi, 27, okunguyena ohlala kuleli flethi eliseZama, eningizimu yeTokyo, kusho umsakazeli womphakathi i-NHK.
Okhulumela amaphoyisa akazange atholakale ngokushesha ukuba aqinisekise lesi sigameko.
OLUNYE UDABA: Kutholakale izidumbu zamantombazane amabili engagqokile
Izikhulu beziphansi phezulu zithungatha owesifazane oneminyaka engu-23 ubudala obenyamalele zase zizithela phezu kwalezi zidumbu ngemuva kokusesha leli flethi kulandela umkhondo obaholele ekutheni lo odukile uyazana noShiraishi.
Ngokusho kombiko weJiji Press, amaphoyisa athole amakhanda amabili efakwe kwi-cooler box ngasesicabheni saleli flethi ngoMsombuluko ngaphambi kokuzithela phezu kwezidumbu ngaphakathi ngoLwesibili.